ချစ်သောကဗျာ -၆ (ဘာသာဗေဒအားနည်းချက်နှင့် ကဗျာဆရာ) | PoemsCorner
အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ကြားဖြတ်ရေးပါသည်။ မရေးတော့ဟု ဆုံးဖြတ်ထားသော ကဗျာအကြောင်းကို ရေးရပြန်ပါသည်။ အမှန်အမှားထက် ကဗျာရေးမည့် လူငယ်လေးများကြိုက်ရာယူပါစေ။ သီအိုရီချပြခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ကို ယုံကြည်စွာရေးနေပါသည်။ အယူအဆဟူသည် တူခဲပါသည်။ မတူသည်ကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
စကားလုံးတိုင်းလည်း အနက်ထွက်သည်၊ ၀ါကျတိုင်းလည်း အနက်ထွက်သည်။ သို.သော်စကားလုံးမှထွက်သော အနက်သည် ဂယက်ထသည်။ ၀ါကျမှထွက်သော အနက်သည် ဂယက်မထ။ ဦးတည်ချက်ပါသည်။
“သွား” ဟူသောစကားလုံးကို ကြည့်လျှင် ပါးစပ်တွင်းမှသွားကိုမြင်ချင်မြင်မည်။ လူတစ်ယောက် လမ်းသွားနေသည်ကို မြင်ချင်မြင်မည်။ “သူကျောင်းသွားသည်” ဟူသောဝါကျဝယ် သွားနေခြင်းကိုမြင်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဂယက်မထ။ စကားလုံးတစ်လုံးထဲကိုကြည့်၍ အဓိပ္ပါယ် မပေါ်ခြင်းသည် ဘာသာဗေဒ၏ အားနည်းချက်မဟုတ်၊ နဂိုရှိရင်းစွဲသဘာဝသာဖြစ်သည်။ ဘာသာဗေဒ၏ အားနည်းချက် ရှိသည်ကိုလည်း ဆက်ပါမည်။
ဘာသာစကားဝယ် သဒ္ဒါနက်နှင့် အဓိပ္ပါယ်နက်ထပ်ခွဲပါရစေ။ သဒ္ဒါနက်သည် သူ.ဘာသာရှိနေသော အနက်သာဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်နက်သည် လူ၏ ရင်တွင်းမှာပေါ်သော အနက်ဖြစ်သည်။
သဒ္ဒါနက်သည် စကားလုံးအဖြစ်ရှိနိုင်သော်လည်း အဓိပ္ပါယ်နက်သည် ၀ါကျဖြစ်အောင် အထိသွားပါသည်။ “က” ဟုသောစကားကို မြင်လျှင် ရင်တွင်းဝယ် “ကခုန်ခြင်း/ကခုန်သည်” အထိမြင်ပါသည်။ “လူတစ်ယောက်” ဟူသောစကားကိုမြင်လျှင် အဓိပ္ပါယ်အနက်၌ “လူတစ်ယောက်ရှိခြင်း/လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်း” အထိဆက်မြင်ပါသည်။
အင်ပရက်ရှင် ပန်းချီစနစ်ဝယ် Mono Tone ခေါ်တတိယအရောင်ကို မချယ်ပဲခံစားသူ၏ မျက်လုံးအတွင်းဝယ် ရောယှက်ဖြစ်ပေါ်စေသောနည်းကိုသုံးသည့် ပန်းချီဆရာများရှိပါသည်။ အလျှင်အမြန် တဖျတ်ဖျတ်လက်နေသော အရောင်သဘောကို ဖမ်းယူဆုတ်ကိုင်မိရန်သုံးပါသည်။
ဥပမာအနီနှင့် အ၀ါရောလျှင်လိမ္မော်ရောင်ရပါသည်။ သို.သော် အနီရောင် အရာဝတ္တုပေါ်သို. အ၀ါရောင်နေထိုးသည်ကို ပြချင်သောအခါ လိမ္မော်ရောင်ထပ်မံမစပ်တော့ပဲ(ပန်းချီကားတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်းမပြုတော့ပဲ) အနီနှင့် အ၀ါကို ဘေးချင်းယှဉ်ဆွဲလိုက်ပါသည်။ လိမ္မော်ရောင်သည် ကြည့်သူ၏ မျက်လုံးထဲဝယ်ပေါ်ပါသည်။ (ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်)
ကဗျာတွင်လည်း စကားလုံးများဆက်စပ်လိုက်သော်အခါ သဒ္ဒါနက်အရ (သဒ္ဒါနည်းအရ) ပေါင်းစု ဆက်စပ်သော ပစ္စည်း၊သမ္ဗန္ဓ စသည်တို.မပါသော်လည်း အဓါပ္ပါယ်နက်အရ ရင်တွင်းဝယ် “တစုံတရာ” ထွက်လာပါသည်။ တခါတရံ ဆင်ခြင်ဥာဏ် ထက် အရင် အဓိပ္ပါယ်နက်က အရင်ပေါ်ပါသည်။ သို.သော်…….
အချို.စကားလုံးများသည် နေရာကို လိုက်၍ အဓိပ္ပါယ် ကွာခြားမှုရှိသွားပြန်ပါသည်။ မင်းခိုက်စိုးစံ၏ ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ၊အဓပ္ပါယ်များ၏အဆုံးကို ပြန်ညွှန်းပါမည်။ ဒီကွန်စထရပ်ရှင်း ကိုသူရှင်းထားပါသည်။ လိုအပ်သလောက် ပြောပါမည်။
သူ.ဥပမာကိုပဲယူပါမည်။ ဘကြီးတော်မင်း ဆိုသည်နှင့် ဝေဿန္တရာမင်းဆိုသည်ကို ကြားရပုံခြင်းမတူပါ ( မြန်မာနားတွင်မတူပါ) ဝေဿန္တရာမင်းသည် မြန်မာနှလုံးအိမ်ဝယ် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွယ်ညိနေသောကြိုးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြိုးကို လှုပ်လျှင် နှလုံးအိမ်ကပို လှုပ်ပါမည်။ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦး၏ စိတ်ဝယ်မူ စိတ်တွင်း၌ပေါ်လာသော ခံစားချက် ကွာခြားမည်ဟုမထင်ပါ။
မောင်သာချိုကလည်း သင်္ဘောဆိုက်ကပ်လာပြီး ကိုလံဘတ်ဆင်းလာတယ် ဟူသောစာသားနေရာဝယ် ယောမင်းကြီးဦးဘိုးလှိုင်ဆင်းလာတယ်ဟု ရေး၍မရကြောင်း ပြောခဲ့ပါပြီ။ ဘာသာစကားကို ကိုင်တွယ်ရာဝယ် ဘယ်နိမိတ်ပုံကိုသုံးမည်နည်း။ ထို.ထက်ပိုသည်မှာရှိပါသေးသည်။ ၀ါကျ အတူတူမှာပင် အဓိပ္ပါယ်နက်မတူကြပါလေ။
“ရှင်က မစားသင့်တာတွေစားတာကိုး ဟုသူမက ညှိုးငယ်စွာပြောလေသည်”
“ရှင်က မစားသင့်တာတွေစားတာကိုးဟု သူမ မဲ့ပြုံးပြုံးရင်းပြောလေသည်”
၀ါကျချင်းတူသော်လည်း မုချအနက် (တိုက်ရိုက်အနက်)သည် ပထမ၀ါကျ၌သာထွက်လေသည်။ ဒုတိယ၀ါကျ ရှိအနက်သည်မစားသင့်တာဟူသည် အစားအစာကိုဆိုလိုရင်းမဟုတ်ကြောင်း သိဆက်အနက်ဖြင့်သိရသည်။ အကယ်၍သာ နောက်ရှိသူမပြောပုံမပါလျှင် အနက်ကဖေါ်သောစကားကို လေသံနားထောင်မှသာလျှင်ရပေမည်။ ခပ်ငေါ့ငေါ့လေသံလား ၊ စိုးရိမ်သောလေသံလား။ ဘာသာစကား၌ လစ်ဟာမှုများများစွာရှိနိုင်ပါသည်။
ဂျွိုက်စ် ၏ ယူလီဆီး ၀တ္တုဝယ် ဘာသာစကားစမ်းသပ်ချက် များများစွာပါပါသည် (ဟုပြောပါသည် မဖတ်ဘူးပါ။၀န်ခံပါသည်) သို.သော်စာလုံးပေါင်းအမှားများသည် တမင်တကာပေါင်းသည်ပဲလား၊ မှားသည်ပဲလားမသိပါနေသည်ဟုလည်းဆိုပါသည်။ သို.သော် ဂျွိုက်စ်သည် ဂျွိုက်စ်သာဖြစ်သည်။
၀တ္တုရှည်တို.ကို ဂျွိုက်စ်က အဆုံးစီရင်ပြစ်သဖြင့် ယခု အစမှပြန်စရတော့မည်ဟု ဆိုသူကဆိုပါသည်။ ဂျွိုက်စ်သည် ဟန်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးအားကိုရပြီးသူဖြစ်ပါသည်။ စု၊တု၊ပြု ကို မလွန်ဆန်နိုင်ကြသော်လည်း မစုပဲ တုနေလျှင်ခက်ပါသည်။ ပိုဆိုးသည်က မတုတတ်ခင်ပြုနေခြင်းပါ။ (စုတုပြုကို ဆရာဇော်ဇော်အောင် ကလည်း ပြောခဲ့ဘူးပါသည်)
ကဗျာ ၀ယ်ဘာသာစကားစမ်းသပ်ချက်တို.ပါလျှင်လည်းပါပါစေ။ကန်.ကွက်ရန်မရှိပါ။ ကျန်လျှင်ကျန်မည်၊ကျလျှင်ကျမည်။ ခေတ်ကလက်ခံလျှင်ကျန်ပါမည်။ လက်မခံလျှင် သူ.ဘာသာပျောက်သွားပါမည်။ ဒါဒါဝါဒီတို.၏ အသံကဗျာ (အဓိပ္ပါယ်မပါ၊ အသံ၏အားသက်သက်ကိုယူထားသောကဗျာများ) အကြောင်းတာရာမင်းဝေပြောဘူးပါသည်။ မအောင်မြင်ခဲ့ဟုလည်း သူ အလေးအနက်ပြောထားပါသည်။
ကဗျာဝယ် ဘာသာစကားကို အားအင်ယူသောကဗျာတို.ရှိပါသည်။ ဘာသာစကားကို ဖျက်စီးရန်ထက် ပိုမိုထက်မြက်လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူမှ အင်အားစိုက်ပါဝင်လာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ( Language poetry also seeks to involve the reader in the text, placing importance on reader participation in the construction of meaning.)
မည်သို.ပင်ဆိုစေကာမူ ကဗျာကို ကဗျာဓာတ်သွင်းပေးသော ကဗျာဇောစေတနာ ကတော့ပါပါသည်။ ဗဟိုချက်မဲ့ခြင်း၊ မတိကျမရေရာခြင်း၊ ဗဟိုချက်များစွာရှိခြင်း မည်သည့် အိုင်ဒီယာများကိုသုံးသုံး ကဗျာ၏ အသက်ဓာတ်၊ ကဗျာဇိဝိနြေ္ဒကို စောင့်ထိန်းထားကြကြောင်း တွေ.နိုင်ပါသည်။
အကျယ်ပြောလျှင်ပြောသလောက်ထွက်သောအကြောင်းအရာကို အတိုပြောရသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲနိုင်ပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်ညွှန်းပါမည်။ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲခွင့်ရှိကြောင်းလည်း အလေးအနက်ဆိုပါသည်။
၂။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် အမြင့်သို.အာရုံညွှန်.တက်ခြင်းသို.မဟုတ် ကဗျာ
၃။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ၀တ္တုရှည်ဆိုသည်မှာ စာတမ်း
၄။ ဦးရွှေအောင် ရသစာပေ၏ရသ
၅။ မင်းခိုက်စိုးစံ ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ၊အဓိပ္ပါယ်များ၏ အဆုံး
၉။ မောင်သာချို ပင်လယ်ဝသို. လှေကလေးနဲ.ထွက်ခဲ့
In: ကဗျာ Posted By: မော်နီ Date: May 25, 2011
ဗမာပြည်သား ကဗျာဆရာ (မောင်ချောနွယ်)
Leave comment2Comments & 277 views
အဲ့ ဒီလိုအချိတ်လေးတွေပြတ်နေတဲ့ ကဗျာတွေရေးဖြစ်ခဲ့ တာကြောင့် ကျနော့ ရဲ့ တစ်ချို့ ကဗျာတွေကို
By: မင်းလူန at May 25, 2011
အားလုံးကို ဖတ်ခဲ့ ပြီးပါပြီ ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မော်နီ ။
By: လူမော်ငြိမ်း at May 26, 2011